Hong Kong: Donald Tsang, aza fady matesa! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Mey 2009 12:45 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, বাংলা, Español, عربي, English
Tezitra tamin'ny fanamarihan'i Donald Tsang Lehiben'ny mpanatanteraka niresaka momba ilay indray 4 jona nandritra ny kabary nataony teo anoloan'ny Mpanao lalàna tamin'ny herinandro (13 mey) ny olona. Hoy ny navaliny raha nanontaniana ny heviny manokana mikasika ny hetsika fitakiana nataon'ny mpianatra tamin'ny 4 jona izy:
Avy eo dia nambarany fa mahasolo ny hevitry ny olona amin'ny ankapobeny izany fomba fijeriny izany, ary io no tena niteraka ny tsikera fa tsy nofidian'ny vahoakan'i Hong Kong izy. Nandika (ho amin'ny teny anglisy) ny valin'ny fitsapan-kevitra avy ao amin'ny HKU ny vohikala ESWN ary dia navoakan'ny 58%n'ny fanehoan-kevitra fa diso ny fitondrana shinoa tamin'ny famoretana nataony tamin'ny 4 jona, na izany aza dia matoky ny ankamaroan'ny olona fa nisy fivoarana ny fanajana ny zon'olombelona nandritra ny telo taona farany. (ao amin'ny ESWN ny antsipirian'ny tatitra sy ny valin'ny fanatsafana ny hevitry ny olona)
Tsy dia nahavita azy i Tung Chee Hwa (Lehiben'ny mpanatanteraka teo aloha)